Sorona Masina ny 05/07/2020 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 05/07/2020
ALAHADY FAHA-14 mandavantaona — A
I JESOA: BE FITIAVANA SY MALEMY FANAHY
Andriamanitra ô, ny Zanakao nietry tena no hanarenanao ny olombelona lavon’ny fahotana, koa ataovy heni-kafaliana masina izahay mino Anao, ary enga anie izahay nafahanao tamin’ny fanandevozan’ny fahotana mba hataonao finaritra migoka ny haravoana tsy manam-pahataperana.
Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Zanakao Tomponay, Izay Andriamanitra velona sy manjaka . . .Amen.
Bokin’i Zakaria Mpaminany
Zak. 9. 9-10
Indro ny Mpanjakanao avy ho aty aminao manetry tena.
Hoy ny Tompo hoe: “Mifalia amin’ny hafaliana lehibe, ry zanaka vavin’i Siôna! Manaova feo firavoravoana, ry zanakavavin’i Jerosalema! Fa indro ny Mpanjakanao avy ho aty aminao; marina Izy sady arovan’Andriamanitra; manetry tena mitaingina ampondra, dia ampondra tanora, zanak’ampondravavy. Hofoanako tsy hisy ny kalesy fiadiana any Efraima, mbamin’ny soavaly ao Jerosalema. Ary hopotehina ny tsipîka fiadiana. Hilaza fiadanana amin’ny firenena Izy; ny Fanjakany dia hahatratra ny hatramin’ny ranomasina ka hatramin’ny ranomasina; ary hatramin’ny ony ka hakamin’ny faran’ny tany.
Sal. 144, 1-2. 8-9.10-11. 13de-14
Fiv.: Manandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka, misaotra ny Anaranao, ry Ilay Mandrakizay.
Manandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka; ny Anaranao isaorako mandrakizay mandrakizay. Misaotra Anao isan’andro aho sy midera ny Anaranao mandrakizay.
Midera Anao, ry Tompo, ny asanao rehetra, misaotra Anao ny mpivavaka aminao; ny voninahitry ny Fanjakanao resahiny, ny asanao mahery teneniny.
Rôm. 8, 9. 11-13
Ry kristianina havana, ianareo dia tsy ao amin’ny nofo, fa ao amin’ny Fanahy, raha mitoetra ao anatinareo koa ny Fanahin’Andriamanitra. Raha misy tsy manana ny Fanahin’i Kristy, dia tsy an’i Kristy izy. Ary raha ny Fanahin’izay nanangana an’i Jesoa ho velona no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an’i Kristy Jesoa koa no hamelona ny vatanareo mety maty, noho ny Fanahiny izay mitoetra ao aminareo. Koa amin’izany, ry kristianina havana, tsy mpitrosa amin’ny nofo isika, ka ho velona ara-nofo. Satria raha velona ara-nofo ianareo, dia ho faty; fa raha vonoinareo amin’ny Fanahy ny asan’ny nofo, dia ho velona ianareo.
Tamin’izany andro izany i Jesoa niteny nanao hoe: “Misaotra Anao aho, Raiko, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa nanafina ny hevitrao tamin’ny hendry sy ny be saina Ianao, ary nanambara azy tamin’ny tso-po kosa. Eny, misaotra Anao aho, Raiko, fa izany no sitra-ponao. Efa nomen’ny Raiko Ahy ny zavatra rehetra ary tsy misy mahalala ny Zanaka afa-tsy ny Ray; ary tsy misy mahalala ny Ray afa-tsy ny Zanaka sy izay tian’ny Zanaka hanehoana Azy. Mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy vesaram-pijaliana, fa hanamaivana anareo Aho. Ento ny jiogako, ary mianara amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po Aho, dia hahita fiadanana ho an’ny fanahinareo ianareo, fa mora entina ny jiogako, ary maivana ny didiko”.
Ry kristianina havana, i Kristy be fitiavana sy malemy fanahy, dia miantso ny mijaly rehetra hohamaivaniny; koa ento am-bavaka hankeo aminy ireo rehetra ianjadiam-pahoriana eo amin’izao tontolo izao.
* Mpanohy asa an’i Kristy ny Eglizy, ka manana adidy hampijoro fikambanana hanamaivana ny fahoriana eto an-tany; koa mangataha mba ho araka ny ilaina ankehitriny ny fikolokoloany an’ireo mijaly.
* Mivavaha ho an’ireo manana andraikitra eo amin’ny fiainam-bahoaka, mba hampian’Andriamanitra ho be fitiavana sy halemy fanahy izy, ka hiandraikitra marina ny madinika sy ny mitrongy vao homana.
* Tsy ny hendry sy ny be saina mandrakariva no tena mpikatroka, mahomby ao amin’ny Eglizy; koa mangataha amin’Andriamanitra mba hatorony ny madinika sy ny olon-tsotra, ny fomba fanitarana ny Fanjakany.
* Mivavaha mba ho azontsika sy hiaikentsika fa ny tena tokony hianarantsika amin’i Jesoa dia Izy malemy fanahy sy manetry tena.
Tompo ô, be ny fahoriana eo amin’izao tontolo izao, koa tohano amin’ny fahasoavanao izahay osa sy malemy, mba ho be fitiavana sy halemy fanahy, dia hahita fa mora entina ny jioganao ary maivana ny didinao.
Tompo ô, handio anay anie ny fanatitra atolotray, hanajana ny Anaranao masina, ary hitantana anay isan’andro hanao asa mendrika ny lanitra.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0183 s.] - Hanohana anay